Nye Na-akwụ Gị ?gwọ? | Martech Zone
Mgbe ụfọdụ anyị na-echefu na ndị ahịa anyị na-akwụ anyị ụgwọ n’ikpeazụ. Tom Peters nwere nnukwu ọkwa taa banyere GM site na GM ins, Mike Neiss:
“Lee, ọ na-ewute m maka ndị-enyi m na ndị ọrụ ibe m na [GM]. Ma, anaghị m emere ha ebere. Ha chefuru imewe, ha chefuru onye ahịa, ha chefuru R&D, ha chefuru na ha bụ ụlọ ọrụ [ụgbọ ala]. O doro anya na ọnwụ ha bụ nhọrọ. Ọ bụghị ihe mgbaàmà nke akụnụba anyị, mana nhọrọ emere n'ime ụlọ mbubata na [GM]… Ọ bụ ikuku ikpeazụ nke ụlọ ọrụ mmiri na-eri.
"Otu olile anya m bụ na ha ga - abụ ihe ọmụmụ maka ndị otu niile nwere olile anya iburu ibu [GM]. Nnukwu ihe ahụ siri ike karị. ”
Dochie [GM] na azụmahịa gị yana [ụgbọ ala] na ụlọ ọrụ gị. Ihe ọ bụla jikọrọ?
Tags: ahịagmmike neiss